Burma: Demanding JUSTCIE for Arakan Women. « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » Burma: Demanding JUSTCIE for Arakan Women.
Burma: Demanding JUSTCIE for Arakan Women.
Yesterday, the innocent Arakan women are brutally killed by Bengali illegal immigrants gangs in Burma. They are doing so so as to get retaliation from Arakan of Burma since OIC, Organisation of Islamic Cooperation, is eyeing on going to Arakan to support and arm Bengali illegal immigrants in Arakan. They are doing so because they see Bengali illegal immigrants’ settlements in Arakan as the FORTRESS for them from where they are planning to colonise the whole Burma as part of their long term strategy.
မြန်မာပြည်တွင်းက အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေ၊ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေ … ဘာသံမှ မကြားပါလားဟေ့။ ပေါက်တောမှာ ကလေး ၄ ယောက် အမေ ကို ဘင်္ဂလီတွေ လှံ နဲ့ထိုးလို့ ပွဲချင်းပြီး သေကုန်ပြီ။ အသက် ၁၇ နှစ် အရွက် အပျိုစင်မိန်းကလေးမှာ လက်မောင်းတစ်ဖက် အဖြတ်ခံရပြီ။ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး လူစင်မမှီ ဒုက္ခိတ ဖြစ်ရပြီ။ ဟို ဥပဒေကြီး ရေပန်းစားတုန်းက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ကြပြီလဲဟေ့…
Burmese Government, Opposition Leaders, Student Leaders and Ethnic Leaders must take swift and bold action immediately to save Arakan of Burma unless otherwise it is leading towards new conflicts. Justice must be done, justice must be known to be done and justice must be seen to be done on the suffering of Arakan victims. Burmese security forces police, military and border guard forces including ethnic armed forces must help protecting Arakan of Burma who are suffering enormously in their very own homeland at the hands of intruding brutal Bengali illegal immigrants.
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်း ဘင်္ဂလီကုလားများက အုပ်စုဖွဲ့ တိုက်ခိုက်သဖြင့် သေဆုံးသွားရသော ရခိုင်အမျိုးသမီးကို ပေါက်တောဆေးရုံတွင် တွေ့မြင်ရပုံ။
If OIC countries really want to help Burma, we urge the OIC countries to take all illegal immigrant Bengalis (so-called Rohingya) proportionally to let them resettle in their respective countries.
We also wanted to highlight here that OIC got their Islamic Human Rights Declaration (based on Islamic Sharia Law) which are not in line with Universal Declaration of Human Rights.
ဂုံးရှာနေစဉ် ကုလားများ၏ အကြောင်းမဲ့ အကြမ်းဖက်ဓါးခုတ်ခံခဲ့ရသည့် ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်အိုင်ကျေးရွာမှ ရခိုင်သူ မမေသန်းခင် ၏ ၃ .၁၁ . ၂၀၁၃ ညနေ ၃း၀၀နာရီ အခြေအနေ စိုးရိမ်ရဖွယ်အနေအထားမှာရှိနေဆဲ ။
OIC countries never learnt to co-exist but to conquer others or at least but to create conflict others or but to create crises. The following are the few examples:
1.When Christians, Jews, Buddhists, Hindus and other religions agreed on Universal Declaration of Human Rights as the standard practice for respecting Human Rights but they don’t agree on this because it is not based on Islamic Sharia Law. Therefore, they adopted their version Universal Declaration of Islamic Human Rights which is based on Sharia Law which is indeed Islamic doctrine.
2.When Christians, Jews, Buddhists, Hindus and other religions agreed on Red Cross as the symbol of Humanitarian embalm helping people and agreed to support International Red Cross but OIC countries said Cross is the symbol of Christians and hence they established International Red Crescent to parallel Red Cross since Crescent is the Islamic symbol.
3.At last not least,afew days ago in London, OIC countries started Islamic Stock Exchange since they can’t bear to see Stock Exchange as it is.
We would say “Mind your own business OIC countries”. We don’t want you in Burma.
* ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်အိုင်ကျေးရွာ လူသတ်မူ ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်း * ============================== ============၂-၁၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီအချိန်က ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်တက်မော် ကျေးရွာ အနီးရှိ စေတီတစ်ဆူ ရှိရာတောင်ကုန်းတွင် ရွာသားများစိုက်ပျိူးထားသော ကျွန်းပင်များကို ပေါက် တောမြို့နယ် ဒုံရွာ မှထွက်ပြေးလာသော ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် နေထိုင်ကြသော ဘဂါင်္လီ ကုလား(၅၀)ခန့်က ခုတ်လှဲ နေသည်ကို ဆင်တက်မော်ကေ…ျးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ကိုရင်ငယ်များတွေ့ ရှိသဖြင့် ရွာသားများကိုသွားရောက် တိုင်ကြားရာ ရွာသားများနှင့်တာဝန်ကျနေသည့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ သွားရောက် ဟန့်တားရာမှ ရုံးရင်း ဆန်ခတ်ဖြစ်ပွါးရာမှ ပစ်ခတ်ရသည်အထိ ဖြစ်ပွါး ခဲ့ရာ ဒုံရွာသား အသက်(၅၅)နှစ်ရှိ ဇူရူဆောင်းမှာ သေနတ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသ တင်းရရှိပါသည်။ ယင်းအချိန်မှာပင် ဆင်တက်မော်ကျေးရွာမြောက်ဘက်တွင် ရှိသော ဆင်အိုင်ကျေးရွာမှ အမျိူးသမီး (၁၀ )ဦးခန့်မှာ မြစ်ကမ်းနားသို့ ဂုံးကောက်ရန်သွားနေသည့်အချိန်ဖြ စ်ပြီး သေနတ်သံ ကြားသဖြင့် မိမိ ကျေးရွာသို့ ပြန်ပြေးလာကြရာ ငှက်ချောင်းရွာမှထွက်ပြေးလာသော ဒုက္ခသည် စခန်းမှာနေထိုင်ကြသော ဘဂါင်္လီကုလား( ၅ )ယောက်က ၊ဆင်အိုင်ကျေးရွာမှာအမျိူးသမီးနောက် သို့လိုက်လာကြပါသည်၊ ယင်းအမျိူးသမီးများမှာ ကုလားများလိုက်လာသည်ကို သိသဖြင့် ထွက် ပြေးကြရာ တကွဲ တပြားစီ ဖြစ်ကာ ရခိုင် အမျိူးသမီး(၅)ယောက်မှာ ရေကမ်းစပ်သို့ရောက်ရှိသွား ကြပါသည်။ ယင်းကုလား( ၅ )ယောက်က ၊ ထွက်ပြေးသွားသော ရခိုင်အမျိုးသမီးများနောက်သို့ အပြေးလိုက်သွားကာ ဒါးဖြင့်ခုတ်သတ်သဖြင့် ဆင်အိုင်ကျေးရွာနေဦးအောင်ထွန်းဖြူ၏ဇနီးဖြစ်သူ မလှခင် ၊အသက် (၃၈)နှစ်မှာ ဦးခေါင်းပွင့်ထွက်သွားပြီး နောက်မှလှံနှင့်ထိုးသတ်လိုက်သဖြင့် အဆုပ်တွင်ထိမှန်ကာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပါသည်။ အတူလိုက်ပါလာသူ ဆင်အိုင်ကျေးရွာသူ မေဆန်းခင် အသက် (၁၇)နှစ်မှလည်း ဘယ်ဘက် လက်မောင်းမှာ ခုတ်ထစ်ဒါဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိသွားပါသည်။ သေဆုံးသူ မလှခင်သမီး နှင့် အတူ မဟန်နုဖြူ ၊ မလှမြေ အး တို့မှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာကြပါသည်။ မလှခင်၏ အလောင်းကို ပေါက်တောမြို့သို့ ပို့ဆောင် လိုက်ပြီး ဒါဏ်ရာရသူ မေဆန်းခင် ကိုလည်း ပေါက်တောမြို့ဆေးရုံသို့ပို့လိုက်ပြီး ဒုံရွာမှ သေနတ် ထိမှန် သေဆုံးသွားသော ကုလား ဇူရူဆောင်း အသက်(၅၅) နှစ်ကို ICRC မှ စပီးဘုတ်ဖြင့် စစ်တွေသို့တင်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သတင်းပေးပို့သူ ဦးမြတ်ထွန်း(ဗဟိုကော်မတီဝင်)ရခိုင်ဒီမိုကရေစီိအဖွဲ့ချုပ် ပေါက်တောမြို့ ရခိုင်ပြည်နယ်Original Source :http://www.narinjara.com/burmese/?p=7565မှတ်ချက် ။ ။ ဤသတင်းအားဖော်ပြရခြင်းမှာ အများပြည်သူများ သတင်းအမှန်ကို သိရှိကြစေရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အမုန်းပွါးစေရန်မရည်ရွယ်ပါ ။ ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်သူများကို တရားဥပဒေ အရ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူအပြစ်ပေးရန်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ အာဏာပိုင်များ ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။အဓိကပြဿနာမှာခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာရှင်အစိုးရများအနေဖြင့် နယ်စပ်လူဝင်မှုထိန်းချုပ်ရေး နှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့မှုကို မိမိတို့ဌာနေတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ ခါးစည်းခံစားနေကြရသည် ဟုသာ ရှူ့မြင်သုံးသပ်မိပါကြောင်းဝမ်းနည်းစွာတွေ့ရှိရပါသည် ။( Admin)
Tags: 1990 election, 2008 constitution, 2010 election, Aung San Suu Kyi, bdcburma, Keywords burmatoday burmese news burmanet aung san suu kyi berma bagan khit pyaing irrawaddy dvb no burmese dvb burmese news mizzima burmese the irrawaddy irrawady aung san suu burmese genocide buy bu
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 04/11/2013 .
← We demand the JUSTICE for victims	Burma (Myanmar): Press Release of Constitutional Reform Network →